इराकी प्रधानमन्त्री निवास ड्रोन हमला -3ghumti
इराकी प्रधानमन्त्री निवास ड्रोन हमला
कार्तिक २१, २०७८ आइतवार ११:०१ बजे
काठमाडौँ । इराकी प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला भएको छ । प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल–कादिमी भने ड्रोन हमलाबाट बच्न सफल भएका छन् । राजधानी बग्दादको ग्रीनजोनमा रहेको प्रधानमन्त्री निवासमा विष्फोटक पदार्थ बोकेको ड्रोनबाट हमला गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कादिमीको हत्या गर्ने उद्धेश्यले उक्त आक्रमण गराइएको इराकी अधिकारीहरुले बताएका छन् । ड्रोन आक्रमणबाट इराकी प्रधानमन्त्री घाइते भएको र उनलाई अस्पताल लगिएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री कादिमी आफैले सामाजिक सञ्जालबाट आफू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले इराक र इराकी जनताको हितका लागि शान्त र धैर्य बन्न पनि आग्रह गरेका छन् । थुप्रै सरकारी कार्यालयहरु र विदेशी दूतावासहरु समेत रहेको भीआपी क्षेत्रमा गराइएको हमलाको जिम्मेवारी भने कसैले पनि लिएको छैन ।
पछिल्ला दिनहरुमा इरानी सत्तासंग सम्बन्धित केही हतियारधारी समूहहरुले गत महिना इराकमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामलाई लिएर ग्रीनजोन नजिकै विरोध प्रदर्शन गर्दै आईरहेका छन् ।
# अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध
# प्रधानमन्त्री निवास
इराकी प्रधानमन्त्री कादिमीलाई लक्षित गरि ड्रोन हमला, कादिमी सकुशल रहेको प्रष्टोक्ति
बंगलादेशमा किन भड्कियो हिंसा ? हिन्दु समुदायका घर पसल निशानामा !
तालिवानसँग अमेरिकाले पहिलो पटक औपचारिक वार्ता गर्दै, तालिवान सरकारलाई तत्काल मान्यता नदिने
अफगानिस्तानको मस्जिदमा आत्मघाती विष्फोट, ५० जनाको मृत्यु सयौं घाइते